Ciyaarta - Mytika Speak
Waxaa laga yaabaa 15, 2022
Bogga ugu weyn / Ciyaarta
Waa maxay Cayaartu?
Nolosha. Waa arrin aragti ah. “Waxaan hayaa fikrad, aan ciyaar ciyaarno.” “Waa maxay ciyaar?” “Waxaan sameyn doonnaa mid.” “Waayahay ...
Qeybta - Ciyaarta
Bulshooyinku casharro ma wada qaataan?
Qofka runta ah ma la beddeli karaa?
Email (loo baahan yahay)